खपि नसक्नु गर्मी - Pradesh Today खपि नसक्नु गर्मी - Pradesh Today
जेठ ०९, २०७५ जीतसागर जी.एम.
घोराही, ८ जेठ ।
दाङमा पछिल्ला केही दिनदेखि अत्यधिक गर्मी बढेको छ । गर्मी अत्यधिक बढेपछि जनजीवन असामान्य तर्फ जान थालेको छ । गर्मीकै कारण सबै क्षेत्र प्रभावित हुन थालेका छन् ।
गर्मीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ । आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, रिक्सा चालक, मजदुर प्रभावित भएका छन्् । दिउँसोमा हुने अत्याधिक गर्मीले बजारमा मानिसहरुको चहलपहलमा समेत कमी आउन थालेको छ । अत्यावश्यक काममा निस्किएका मानिसहरु पनि गर्मीबाट छलिएर हिड्ने गरेका छन् । दाङमा यो वर्षकै अधिकतम तापक्रम ३६ डीग्री सेल्सीयससम्म पुगेको छ, तर गत वर्षकोे तुलनामा यो कम हो ।
केही दिनदेखि दाङको तापक्रम ३६ को सेरोफेरोमा रहेको जल तथा मौसम फिल्ड कार्यालय घोराहीले जनाएको छ । गतवर्ष अधिकतम तापक्रम ३८ दशमलव २ डिग्री सेल्सीयससम्म पुगेको थियो । जल तथा मौसम फिल्ड कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रकाश गुरुङका अनुसार दाङमा यो वर्ष अधिकतम तापक्रम ३६ डिग्री पुगेको छ ।
निमित्त प्रमुख गुरुङले गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष मौसमको अधिकतम तापक्रममा वृद्धि नभए पनि गर्मीको महशुस धेरै भएको बताए । बढ्दै गएको जनसंख्याको चाप र जथाभावी वनजंगल फडानीका कारण धेरै गर्मीको बढेको उनले बताए । उनले भने ‘गर्मी हामी मानव जातिको गलत क्रियाकलापका कारण विस्तारै प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । वर्षेनी अत्यधिक गर्मी बढ्नुको मुख्य कारण वन विनाश नै हो ।’ प्लाष्टिक, टायरजस्ता वस्तुलाई जलाउदा, उद्योग कलकारखाना, पुराना थोत्रा गाडी र मेसिन आदिबाट निस्कने धुवाँ, धुलो र प्रदुषणले पनि वातावरणमा असर पारिरहेको गुरुङले बताए ।
यसले सूर्यको किरणलाई प्रत्यक्षरुपमा पृथ्वीमा आउन रोक्ने ओजन तहलाई नष्ट गरेर पातलो बनाउँदै जान्छ जसका कारण पछिल्लो समय तापक्रमको अवस्था सामान्य हुँदा पनि अत्याधिक गर्मीको महसुस हुन थालेको छ । ‘तीन÷चार दिनदेखि धेरै गर्मी बढेको महसुस भएको छ’ तुलसीपुरका पूर्णप्रसाद धितालले भने, ‘यो जेठको सुरुमै खपिनसक्नु गर्मीले सास्ती दिइरहेको छ । एकातिर गर्मी छ, अर्काेतिर यही समयमा लोडसेडिङ र लोभोल्टेज विद्युतले अर्काे हैरानी थपेको छ’ उनले भने । धितालले दिउँसो गर्मीका कारण बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
दिउँसोमा हुने अत्याधिक गर्मीले बजारमा मानिसहरुको चहलपहलमा समेत कमी आउन थालेको छ । अत्यावश्यक काममा निस्किएका मानिसहरु पनि गर्मीबाट छलिएर हिड्ने गरेका छन् । दाङमा यो वर्षकै अधिकतम तापक्रम ३६ डीग्री सेल्सीयससम्म पुगेको छ, तर गत वर्षकोे तुलनामा यो कम हो ।
गर्मीका कारण विभिन्न निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीको संख्या बढ्न थालेका छन् । गर्मीको कारण रिङ्गटा, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, शरीरमा उच्च ज्वरो हुने, वान्ता हुने र बेहोस हुने जस्ता समस्या देखिन थालेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका जनरल फिजिसियन डाक्टर जितनारायण यादवले जानकारी दिए । गर्मी मौसम बढेसँगै राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा दैनिक चार सय भन्दा बढी बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका जनलर फिजिसियन डा. यादवका अनुसार गर्मीका कारण जन्डिस, पेट दुख्ने, झाडापखाला, हैजा, रगतमासी, फुडपैजन, टाइफाइटजस्ता रोग देखापर्ने भएका कारण सचेत रहन उनले सबैमा आग्रह गरेका छन् । गर्मीको समयमा सर्पको पनि बिगबिगी बढ्ने भएका कारण सावधानी अनाउनुपर्ने सुझाव दिए । पछिल्लो समय बजारमा गर्मीले मानिसहरु बिहान बेलुकामा मात्रै आवात–जावत गर्न सुरु गरेका छन् । दिउँसोमा बजारमा चहलपहल कम देखिने गरेको छ । बढ्दै गएको गर्मीका कारण दिउँसोको समयमा हिड्डूल गर्न समस्या हुने गरेको छ । दैनिक रुपमा बढ्दै गएको गर्मीका कारण दैनिक कामकाजमा समेत समस्या हुने गरेको छ ।
गर्मीका कारण विद्युतको माग पनि बढ्न थालेको छ । गर्मी समयमा पंखा, फ्रिज, एसि कुलरलगाउत आदि बढी चल्ने भएका कारण पनि अन्य समयको तुलनामा गर्मी मौसममा अत्याधिक विद्युत खपत हुने गरेको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र घोराहीका प्रमुख मधुसुदन यादवले बताए । जाडो समय भन्दा दुई गुना बढी विद्युतसमेत गर्मीमा खपत हुने गरेको यादवले बताए । दैनिक रुपमा बढ्दै गएको गर्मीका कारण बजारमा चिसो पेय पदार्थ माग बढेको छ । गर्मी बढेपछि चिसो पेय पदार्थ बढी माग हुने गरेको होटल सञ्चालक अम्बरबहादुर वलीले बताए । गर्मी मौसम सुरु भएसँगै बजारमा चिसो पेय पदार्थहरु बढी बिक्री भएको उनले बताए ।
हर्न निषेध सहरमा चौपायाको ताती